ရခိုင် အရေး ပြန်ဝန်ဟောင်း ဦးရဲထွဋ် အမြင် အရင်နဲ့ မတူ ကွာခြားမှုတွေ ရှိနေပြီ လား? | Danya Wadi
»သတင်းများ»ရခိုင် အရေး ပြန်ဝန်ဟောင်း ဦးရဲထွဋ် အမြင် အရင်နဲ့ မတူ ကွာခြားမှုတွေ ရှိနေပြီ လား?
ရခိုင် အရေး ပြန်ဝန်ဟောင်း ဦးရဲထွဋ် အမြင် အရင်နဲ့ မတူ ကွာခြားမှုတွေ ရှိနေပြီ လား?
Posted by danyawadi on December 25, 2016 in သတင်းများ, General
ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၆
၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလ ၁၈ ရက် MPC စင်တာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တွေ့ရသော ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဟောင်း ဦးရဲထွဋ်
– ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးရဲထွဋ်သည် ယခုအခါ စင်္ကာပူအခြေစိုက် Institute for Southeast Asian Studies တွင် အဆင့်မြင့် ဧည့်သည်တော် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ဘ၀ဖြတ်သန်းလျက်ရှိသည်။ လုပ်ငန်းသစ်နှင့်အတူ ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သူ၏ အမြင်သစ်မှာလည်း အံ့သြစရာ စာမျက်နှာတစ်ရပ်ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
“အာဆီယံ၏ ၀င်ရောက်မစွက်ဖက်ရေးမူကို စိန်ခေါ်လျက်ရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာ” ခေါင်းစဉ်တပ် ISEAS ၏ စာတမ်းသစ်တစ်ခုတွင် – ရိုဟင်ဂျာ ဟူသော အမည်နာမကို အသုံးပြုခြင်းအပေါ် နှိပ်ကွပ်ထားမှုမှာ ထိုလူ့အဖွဲ့ အစည်း၏ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ရာရောက်ကြောင်း၊ စစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု များကို ကာကွယ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးရဲထွဋ်က လမ်းဟောင်းမှခွဲထွက်၍ ဆိုထားသည်။ သို့သာမက စာမျက်နှာ ၇ မျက်နှာအတွင်း ရိုဟင်ဂျာ ဟူသော စကားလုံးကို ၃၃ ကြိမ်တိုင်တိုင် အသုံးပြုထားသည့်အပြင် လူနည်းစုဝင် မွတ်စ်လင်မ်များအား နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရေး၊ ဖိနှိပ်ညှင်းဆဲမှုအဆုံးသတ်နိုင်ရန် အာဆီယံမှ လူသားချင်းစာနာမှုအရ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ရေးအတွက် နှိုးဆော်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အငြင်းအပွားရဆုံးအရေးတစ်ခုအပေါ် မိမိ၏နှလုံးသားပြောင်းလဲလာစေရန် စင်္ကာပူပညာရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်း က များစွာ အထောက်အကူပြုခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန် Coconuts သတင်းဌာနသို့ ဦးရဲထွဋ်မှ အီးမေးလ်ပေးပို့ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်နှစ်တာအတွင်း ရှားပါးသည့်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို မြင်တွေ့ရခြင်းဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။ ဦးရဲထွဋ်နှင့် ပူးတွဲရေးသားသူ Hoang Thi Ha က ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ချက်အမည်နာမအား မြန်မာအစိုးရ၏ ငြင်းပယ် ချက် အပေါ် ဝေဖန်မှုဖြင့် စာတမ်းအစပြုထားသည်။
“ပြဿနာကို ဖန်တီးနေခြင်းက ပြဿနာဖြေရှင်းရေး ဒေသတွင်းချဉ်းကပ်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်လာအောင် တွန်းပို့ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုက ခက်ခဲတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ပယ်ချထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူတို့က ရေးသားသည်။
၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ NLD ပါတီ အနိုင်ရရှိ၍ ဦးရဲထွဋ်သည်လည်း သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ရာထူးကို လက်လွှတ်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဝေဖန်ချက် တစ်ရပ်ဟု ထင်စရာရှိသည်။ သို့သော်လည်း ဒေါ်စုကြည်အနိုင်ရသော ရွေးကောက်ပွဲ၏အလျင် မြန်မာအစိုးရ က ဤလူမျိုးရေး ၀ိသေသ ကို ပယ်ချထားပြီးဖြစ်သည်။
ဦးရဲထွဋ်ကိုယ်တိုင်က ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစည်းဝေးပွဲအပြီး၌ မြန်မာပြည်သူ လူထု နှင့် အစိုးရတို့သည် ရိုဟင်ဂျာ ဟူသော အမည်နာမကို လက်မခံကြောင်း၊ ယခင်နှစ်များစွာ ကပင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘာသာကွဲများစွာအကြား ပြဿနာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့မှာ ပြည်တွင်းရေးသာဖြစ်၍ မြန်မာ အစိုးရနှင့် ပြည်သူတို့မှ ကိုင်တွင်ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မတ်လတွင် ၎င်းတို့သည် ရိုဟင်ဂျာအဖြစ် ခံယူပါက မြန်မာအစိုးရမှ သန်းကောင်စာရင်းကောက်ခံမှုထဲ ထည့်သွင်းမည် မဟုတ် ကြောင်း သူက ကြေငြာခဲ့သည်။ များမကြာမီ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သူနှင့်သူ့ပါတီ ရှုံးနိမ့်ပြီးသည့်နောက် သူက “ရိုဟင်ဂျာ အမည်နာမ သုံးနှုန်းခြင်းကို အပြည့်အ၀ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ ရပ်တည် ချက်ဖြစ်တယ်” ဟုလည်း ပြောဆိုခဲ့သေးသည်။
ရိုဟင်ဂျာအသုံးအနှုန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စေ့စပ်မရနိုင်သော နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အနေအထားအပေါ် သူက ဖျန်ဖြေ ပြေလည်မှု တံတား ထိုးရန် အမြင်ကို တင်ပြထား၏။ ရိုဟင်ဂျာအား (တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ နီပေါ ကဲ့သို့) လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ရပ်၏အမည်တစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုရန် အဆိုပြုချက်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းထားသည်။ အဖက်ဖက်မှ သုံးသပ်ပြီး အမြင်နှစ်ရပ်ကိုလည်း ချပြထား၏။ (က) ရိုဟင်ဂျာတို့အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား စာရင်း၌ ပါဝင်ရေးကို စွန့်လွှတ်၍ နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးကိုသာ အားထုတ်သင့်သည်။ (ခ) မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မွတ်စ်လင်မ် တို့ထံ ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်ပြုခွင့်ရှိကြောင်း လက်ခံသင့်သည်၊ ထို့ပြင် ၎င်းတို့အတွက် တိကျသေချာ ပွင့်လင်းမြင်သာသော နိုင်ငံသားနှင့်တိုင်းရင်းသားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအမံ တစ်ရပ်ကို အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
Coconuts သတင်းဌာနသို့ ဦးရဲထွဋ်၏ပြောကြားချက်များအနက် အချက်အချို့ကို အောက်ပါအတိုင်း စိတ်ဝင်စား ဖွယ် ရာ တွေ့ရသည်။
– ရိုဟင်ဂျာများအနေနှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးစာရင်းထဲပါဝင်အောင် ကြိုးစားခြင်းမှာ အချည်းနှီး သာ ဖြစ်မည်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပြောင်းရွှေ့ဝင်ရောက်လာသည့် အခြားအုပ်စုများကဲ့သို့ နိုင်ငံသားဖြစ်ရေး အတွက် ကြိုးစားမှုသာလျှင် ပြဿနာ၏တစ်ခုတည်းသောအဖြေဖြစ်သည်။
– မြန်မာအစိုးရ နှင့်ပြည်သူတို့သည် ရိုဟင်ဂျာကို အခြားတိုင်းရင်းသားများနည်းတူ တိုင်းရင်းအုပ်စုဝင်တစ်ခု အနေဖြင့် လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်၊ ဗြိတိသျှလက်ထက် တရားဝင်သန်းကောင်စာရင်း၌ ရိုဟင်ဂျာ ဟူသော အမည်နာမကို အသုံးပြုထားခြင်း မတွေ့ရ၊ ၎င်းအသုံးအနှုန်းသည် ၁၉၅၀ ခုနှစ်များအတွင်းမှ ပေါ်ထွက် လာခြင်းဖြစ်သည်၊ အနောက်တိုင်း သံရုံးများသည်ပင်လျှင် ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ ဘင်ဂါလီ ဟုသာ သုံးနှုန်း ခဲ့ကြသည်။
– ရိုဟင်ဂျာတို့သည် ယင်းကွဲပြားမှုအပေါ် အထိမခံဖြစ်မည့်အစား ပြေလည်ရေးဖက်သို့ ဦးလှည့်သင့်သည်။
– ဘင်ဂါလီ အားလုံးနီးပါးတို့သည် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအကြား ကွဲပြားချက်ကို နားမလည်ကြ၊ ၎င်းတို့ ဘာသာရေးဆရာများ၏မှိုင်းတိုက်မှုကြောင့် တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှသာလျှင် နိုင်ငံသား အခွင့် အရေးရလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်နေကြသည်။
– ရိုဟင်ဂျာတို့၏ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးအား ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေအရ ပေးအပ်သင့်သည်။
– အောက်တိုဘာ ၉ ရက် တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေအနေမှာ နောက်ထပ် အဆင့် တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ၂၀၁၂ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်၏နောက်ဝယ် သာမန်ရွာသားတို့မှာ ပိုပြီး အစွန်း ရောက်သွားခဲ့ရာ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် ခြေလှမ်းသစ်တစ်ရပ် လိုအပ်နေသည်။ ISIS သည် မလေးရှား နှင့် အင်ဒိုနီးရှားမှ မွတ်စ်လင်မ်များကို စုစည်း၍ ရခိုင်ပြဿနာအား အသုံးချရန် ကြံစည်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနှင့် ပြည်တွင်းရေးသက်သက်အဖြစ်သာ သဘောမထားဘဲ အကြမ်းဖက်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ငန်းများကို အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။
– ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာ များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ချပြသင့်သည်။နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေး ဆက်နွှယ် ချက်ကြောင့် ယမန်နှစ်မှစပြီး ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာ အာဆီယံအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲအထိ ဂယက်ရိုက်လာခဲ့ ကြောင်း သူ၏ စာတမ်းတွင်လည်း ရေးသားထားသည်။
“ရိုဟင်ဂျာတို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရေးတောင်းဆိုချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော့်ယူဆချက် ပြောင်းလဲသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ISEAS က ပညာရှင်အသိုင်းအ၀ိုင်းက ကျွန်တော့်ကို အရှိတရားအပေါ် ပိုပိုပြီး သိမြင် နားလည်လာစေပါတယ်” ဟူသော စကားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာများနိုင်ငံသားဖြစ်ရေးတွန်းအားပေးသော လှုံ့ဆော်မှုပြု ရန် မိမိ၏လူထုနှင့်ထိတွေ့မှု၌ အသုံးချသွားမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိသည် လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ တစ်ဦးမဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိ၏ပညာရပ်အမြင်ကို မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ဦးရဲထွဋ်က အဆုံးသတ်ပြောကြား သွားသည်။
← နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ဇနီး ဒေါ်စုစုလွင် အား Global Inspirational Leadership Award 2016 ဆု ချီးမြှင့်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ လမ်းများ၏ ယခင် အမည်များ →